Vahaolana tsy manam-petra robotic FANUC VISION
Zoma 08 Mey 2020 by Cristina Maria Sunea
Ity fitoeran-tavoahangy famoahana tavoahangy ity dia ahafahan'ny mpandraharaha misintona kitapo, lalantsara ary pallet mora foana amin'ny tavoahangy 2m³. Avy eo, ny tavoahangy dia alefa tsikelikely amin'ny lohan'ny tsy mpiorina trano iray, hisorohana ny fitohanan'ny tavoahangy.
Mety amin'ny tavoahangy misy tavoahangy marobe, miainga amin'ny tavoahangy kely misy paolo 5L!
Published in Endriky
Mpamaky tavoahangy tokana (mpanangona mahay)
Ity mpividy tavoahangy ity dia unscrambler tavoahangy izay mampiasa vina ho an'ny fanekena ny tavoahangy ary robot iray amin'ny fikambanan'ny sy ny toeran'ny tavoahangy. Mialà amin'ny gony amin'ny tavoahangy!
Izy io dia afaka mahazaka vokatra isan-karazany (avy amin'ny 50ml ka hatramin'ny 5L) sy ny tavoahangy feno tavoahangy (boribory, boribory ary efamira).
Twin head flexer picker (tavoahangy mpividy
Ity picker flex ity dia unscrambler tavoahangy izay mampiasa vina ho an'ny fanekena ny tavoahangy ary robot amin'ny fikambanan'ny sy ny toeran'ny tavoahangy. Mialà amin'ny gony amin'ny tavoahangy!
Alarobia 13 Jolay 2016 by Cristina Maria Sunea
Ity rafitra famoahana paletaka ity dia mitaona ny fototry ny boaty (paporitra), ary manintona tsikelikely ny boaty na silo ao anaty fitoeram-pandresen'ny unscrambler.
Alakamisy 29 martsa 2018 by Cristina Maria Sunea
Tabilao tokana (takelaka) fametahana latabatra - tavoahangy unscrambler
Ity latabatra mihantona amin'ny kamiao ity dia manala ny tady misy tavoahangy fihodinana / kianja. Arotsaka ao anaty fitoeran-dàlana any anaty fehikibo ilay tavoahangy. Avy eo, amboarina amin'ny fehikibo fivoahana izy ireo, mamorona tavoahangy tavoahangy tokana.
Ny takelaka fametahana takelaka roa (tray) fametahana latabatra - tavoahangy unscrambler
Ity tavoahangy tsy mahomby ity dia manala ny fitoeran'ireo tavoahangy boribory / kianja. Arotsaka ao anaty fitoeran-dàlana any anaty fehikibo ilay tavoahangy. Avy eo, amboarina amin'ny fehikibo fivoahana izy ireo, mamorona tavoahangy tavoahangy tokana. Hafainganam-pandeha ambony indrindra: 3000 - 6000 BPH.